Akwụkwọ Meen Boriboune na Martech Zone |
Edemede site na Meen Boriboune
I nwere 30 sekọnd iji jide uche ndị na - agụ akwụkwọ gị ozugbo ha pịa email gị. O doro anya na nke a bụ obere windo. Ọ bụrụ n’ịdị kam, mgbe ahụ ị nwere ike iche na animation dị ntakịrị ihe iji iji azụmaahịa email, mana ịchọrọ ịdọta uche ndị nnata gị. Ya mere, gịnị ka ị na-eme? Agbanyeghị, mgbe ị gabigachara adreesị ozi ịre ahịa nke email anyị, nke a nwere ike ịbụ ezigbo ngwaọrụ maka ndị na-ere ahịa email ma ọ bụrụ na etinyere ya nke ọma. Ọbụghị naanị
Prọfesọ azụmahịa m, Marvin Recht, "You nweghị ohere nke abụọ ịmere mbụ," ọ na-echetara ụmụ akwụkwọ ya oge niile. Emela ihe ahụ ọtụtụ ndị mejọrọ tupu gị emee ihe. N’ụwa taa, echiche mbụ nke echiche ka na-eme ezi. Agbanyeghị, ndị ahịa dijitalụ na soshal midia na-enye anyị ohere ijikọ n'ụzọ nke anyị enweghị ike n'oge gara aga. Na echiche ị ga-ahapụ na ibe Facebook gị, iyi Twitter, ma ọ bụ weebụsaịtị nwere ike ịnwe ụfọdụ